Faucet fandroana fandroana mikraoba voadio
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana miely be / WOWOW Nikela borosy 8 Inch miparitaka be
WOWOW 8 inch maneran-tany fandroana miparitaka ny Nickel
naoty 4.95 avy tany 5 mifototra amin'ny 20 mpanjifa naoty
(20 mpanjifa famerenana)
roa mitazona lavarangana fandroana be dia be ahafahana mameno ny filan'ny rano misintona mafana sy mangatsiaka, manavao ny haingon-trano fandroana, izany no safidy tsara indrindra ho anao!
2320300 torolàlana fametrahana
Ny fandroana nandiitra fandroana dia nivezivezy tamin'ny 2320300
Fantatrao ve fa ny faucet ao amin'ny trano fidianao dia iray amin'ireo zavatra manandanja indrindra ao amin'ny trano fidianao amin'ny famolavolana? Na izy ireo aza dia kely, ny faucet dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny haingon-trano fidianao. Ny fantsom-pandroana fandroana dia teboka ifantohana voajanahary amin'ny famolavolana ny fandroana. Midika izany fa rehefa miditra ao amin'ny trano fidiovana ny olona iray, ny iray amin'ireo zavatra voalohany nahasarika ny sainy dia ireo faucet ao amin'ny trano fidiovana. Noho izany ny faucet ao amin'ny trano fidiovana dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny famolavolana trano fidiovana ary tokony ho voafantina tsara.
Mampiseho izany fa tsy maintsy misafidy tsara ny faucet ianao. Mety manana teti-bola (tapitra) ho an'ny trano fidianao vaovao ianao. Matetika hitantsika fa ny faucets ao amin'ny trano fidiovana dia tsy tafiditra ao amin'ny famolavolana sy teti-bola voalohany. Ny faucet ao amin'ny fandroana dia matetika no voafantina amin'ny faran'ny fizarana, raha efa napetraka kosa ny trano fidiovana. Mety ho fanamby tokoa ny mahita fantsona fandroana fandroana mifanaraka amin'ny safidinao sy ny teti-bolanao. Ny tetibolan'ny trano fidiovana matetika dia lany amin'ny farany noho ny fisehoan-javatra tsy ampoizina, ary tsy te-hanaiky lembenana amin'ny famolavolana sy ny kalitao amin'ny fisafidianana ireo fantsona fandroana fidianao ianao. Indrindra rehefa fantatrao fa ireo faucets ao amin'ny trano fandroana ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny haingon-trano fidianao amin'ny ankapobeny. Tsara noho izany ny mahafantatra fa WOWOW dia manolotra faucets fandroana fandroana tsara sy kanto amin'ny vidiny mirary. Vokatr'izany, WOWOW dia manome anao ny sandan'ny vola tsara indrindra.
Ny fandroana vy amin'ny fandroana tafahoatra no nanosika ny nela niely
Ny fauxet vita amin'ny fandroana any WOWOW dia nikela nipoitra namboarina tamin'ny vy mahery. Ho tsikaritrareo avy hatrany izany rehefa mitazona ity faucet fandroana ity eny an-tananao. Ny fantsom-pandroana fandroana nanosotra nikela milanja 3.8 lbs izay manambara ny kalitaony nefa tsy misy fisalasalana. Azonao atao ny matoky ny faucet fandroana ambony kalitao izay haharitra mandritra ny taona maro. Mazava ho azy fa ny akora vita amin'ny varahina mafy dia tsara lavitra noho ny metaly hafa. Miaraka amin'ireo karazana atiny metaly goavambe ireo dia tsy mila miahiahy mihitsy ianao momba ny olana amin'ny harafesina ohatra. Ankoatr'izay, ny fitaovana avo lenta dia manolotra fitoniana sy fiainana fetra farany ambony. Ny kalitaon'ny rano ho maimaim-poana koa ary noho izany safidy tsara indrindra amin'ny fahasalamanao.
Ankoatr'izay, ny paompy fandroana fandroana nikatona nikela niparitaka vita tamin'ny nikel borosy. Tsy io famaranana io ihany no manome fikitika mahafinaritra ny famolavolanao trano fidiovana, mahazaka fanoherana ihany koa izy io. Ny famaranana nikela borosy dia manakana ny hamandoana sy ny gorodona, izay mahatonga ny faucet ao amin'ny fandroana fandroana nikraoba voadidy- sy tasy. Noho izany dia rendrika ambany ambany ao amin'ny trano fidianao, mora diovina amin'ny famafana lamba. Tsotra toy izany!
Ny tafiam-pitondrana namboarina mahery vaika no nanosika ny nela niely be
Ny jaky fandroam-baravarankely WOWOW dia nivezivezy tamin-javamaniry miparitaka ny fefy roa miparitaka miendrika rano fandroana izay mifanena amin'ny filanao manitsy ny rano amin'ny rano mafana sy mangatsiaka. Ny famolavolana midadasika noho izany dia azo afindra ao amin'ny 4 ka hatramin'ny 16 santimetatra. Mila ny tendrombohitra 3-hole fotsiny ny faucle ary ny zotram-pametrahana dia mety hasiana ny filanao sy ny zavatra takinao manokana.
Ny tsanganana amin'ny kianja avo dia azo antoka fa endrika tsy manam-paharoa izay tsy ho hitanao amin'ny plastika fandroana maro hafa izay azonao jerena eny an-tsena. Betsaka ny poketra fandroana toa mitovy. Mety ho sarotra be ny mahita zavatra manokana momba ny faucets. Ankoatry ny famolavolana feno fahasamihafana, ny fantsom-pako amin'ny fandroana avo dia nivezivezy amin'ny nickel miparitaka dia manome fanadiovana be dia be ao ambanin'ny spout mba hanomezana fiononana feno. Noho izany, ny jaky fandroana tokana tsy manam-paharoa miaraka aminao dia manome endrika maoderina sy fampiononana miaraka amin'izany. Raha ny fomba azo ampiharina dia tsy mila mananty tanana ianao mba hahatongavana amin'ny fikorianan'ny rano. Izany dia mahatonga azy ho asa mahamety azy.
Mihetsiketsika be ny orona namboarina mahery vaika
Ny tànan'ny 2 amin'ny fandroana azo fandroana ity dia manolotra anao ny fahafahanao mifehy tsara ny volume sy ny mari-pana amin'ny rano. Ny fehin-tanana 2 dia vita amin'ny alàlan'ny zinc matanjaka ary manolotra fametahana mora sy voalamina tsara. Tsy ny fandroana namboarina avy any amin'ny efitra fandroana ihany no azo tanterahina tsara, fa ny spout ihany koa dia manome fisondrotra 360 degre. Noho izany dia azonao atao ny mametraka ny palitao ao anaty efitrano fandroana manaparitaka amin'ny fomba mahasosotra anao, ary afaka mamadika azy amin'ny lamosina ianao. Izany dia manamora ny fanadiovana ny fandroana fandroana ohatra.
Ankoatry ny haingam-pandeha mora aminy dia afaka apetraka mora foana ny jaky fandroana voapoizin-drameva. Ny endri-javatra famoronana haingana haingana dia tsy manam-paharoa amin'ny tsena. Izany dia mamela ny fampifandraisana ireo fifandraisana rehetra am-pilaminana sy amin'ny alalanao. Ny tsipika mafana sy mangatsiaka dia afangaro amin'ny fantsom-pampana haingana izay afaka mivalona fotsiny tsy misy ritra. Amin'ity teknika marina ity dia azonao antoka ihany koa fa tsy hiroborobo ny fantsonao rano. Ny sakamalaho amin'ny fandroana namboarina dia nivezivezy tsy mora amin'ny fametrahana plumber lafo vidy.
Niparitaka ny nikelin-trano fandroana miady
Ny fantsom-pandroana fandroana nikatona nikelina be dia be dia be niaraka tamin'ny fitaovana ilaina, anisan'izany ny kitapo fametrahana. Ankoatry ny spout avo toradroa sy ny tahony 2, ny fonosana dia misy lalan-drano, fantson-drano 2 50cm ho an'ny rano mangatsiaka sy mafana, fijanonana 1 miakatra ary kojakoja sy fitaovana feno.
Satria manome antoka i WOWOW fa manome ny sandam-bola tsara indrindra izy, ny nickel voaravaka fantsom-pandroana fandroana dia miaraka amin'ny antoka 90 andro famerenam-bola. Raha tsy ho gaga ianao amin'ny sandan'ny vola azonao, dia azonao atao ny mamerina ny fantsom-pandroana fandroana feno rano fa tsy misy olana. Azo antoka ny hamerenanao vola feno nefa tsy misy fanontaniana apetraka aminao. Ankoatr'izay, WOWOW dia manome anao fe-potoana fiantohana 3 taona. Raha ny paompy fandroana fandroana nikatona nika dia tsy hanao araka ny antenainao hanaovana azy, WOWOW dia hanolo ny faucet fidianao amin'ny iray vaovao. WOWOW dia mandray ny andraikiny ho zava-dehibe ary tsy handiso fanantenana anao velively.
Ny tombony amin'ny fandroana fandroana dia nanaparitaka ny nickel tamina fomba fohy:
• Manome wow-point amin'ny fandroana rehetra
• Famolavolana manana endrika 7 mampiavaka
• Namboarina nikela faran'izay vita
• Fitaovana vy matevina
• Fiaretana mandritra ny fiainana
• warranty 3 taona
SKU: 2320300 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana miely be Tags: 2 Fandraisana, Nickel nopotehina
11.2 X 10.1 X 3.2 santimetatra
Varahina / Stainless vy / Zinc firaka
Rano mafana / mangatsiaka
Rehefa nandinika lalina
Z *** ny2020-04-28
Sarany lehibe amin'ny vidiny. Ny ampahany amin'ny vidiny. Toa tsara. Milamina sy tery ny fihetsika atao amin'ny tahony. Mariho fa tsy afaka mihodina ilay spout. Tsy nikaroka manokana an'io aho ary tsy olana izany fa ireo nosoloiko dia nanana an'io fiasa io.
Mora apetraka. Mitandrema fotsiny rehefa mametaka ny tsipika famatsiana hikarakarana ny rano mitete. Mampiasà wrenches roa hanamafisana azy ireo. Ankoatra izany, faucet tena tsara. Mendrika ny fividianana!
W *** f2020-05-03
Nandany teti-bola henjana aho ary nifidy izany ho an'ny fantsom-pandroako. Tiako ny haavony sy ny endriny tsotra, efa ho iray volana izao no napetraka ary mandeha tsara izy io. Hanoro hevitra mafy an'io aho!
manamboatra trano hofan-trano izahay hametrahana eny an-tsena hamidy amin'ny volana manaraka. Nividy zava-poana tao amin'ny trano fidiovana tao amin'ny fivarotana boaty lehibe teo an-toerana izahay fa ny vidin-tsolika kosa dia lafo loatra. Nijery azy ireo tamin'ny WOWOW aho ary nanapa-kevitra momba an'io. Faucet be mijery indrindra ho an'ny vidiny. Mora ny mametraka azy ary tafiditra ao daholo ireo faritra ilainay.
Io no faucet tsara indrindra ho an'ny vidiny! Metaly daholo izy io miaraka amina fantsom-by sy fidina amin'ny metaly rehetra miaraka amina fantsakana fisamborana! Tsy misy fanadiovana volo intsony izao!
Iray amin'ireo fividianana tsara indrindra hatreto izay nampiakatra ny fijeriko tao amin'ny trano fidiako. Fanaterana haingana..fametrahana mora. Ny kalitao mitovy amin'ny andoavanao indroa ao amin'ny Home Depot. Raiso ny sandam-bola rehetra. Faly be amin'ny fividianako.
C *** f2020-05-09
Faly be aho fa nitady an-tserasera hahita an'io faucet io. Amin'ny vidiny mirary amin'ny vidiny ambany lavitra noho ireo hitanao any amin'ireo magazay fivarotana boaty lehibe, ary tsy nanao sorona na inona na inona izahay raha ny fahitana azy. Tsara tarehy izy izany. Tena hividy indray amin'ity marika ity.
*** B E2020-05-13
Tena fametrahana mora sy kalitao ary fomba fanao mendrika. Ampitahao amin'ireo faucet hafa azoko avy amin'ny Home Depot, ity iray ity tena mendrika hividy amin'ny kalitao avo indrindra nefa ny antsasaky ny vidiny. Atoro ho an'ny namako koa
*** B E2020-05-16
Tiavo ny lolo. Mora ny fametrahana ankoatr'izany, raha tsy mila hose lava kokoa isika mba hilentananay. Toa io ary mahatsapa farafahakeliny avo roa heny ny vidiny voaloany. Novidiana tsara ilay basy napetraka tsara tarehy izay antsipiriany kely fa lasa tsara tarehy kokoa ny zava-drehetra. Misaotra anao!
Mora tokoa ny mametraka azy. Ary manana fonon-tànana aza ny ao anatiny. Mandany adiny iray aho maka ilay taloha :(. Ary 15mins mametaka iray vaovao, btw tsy plumber aho. Mafana na mangatsiaka nomarihin'izy ireo mazava be. Tsy mety diso. Amin'ny ankapobeny, vidiny mirary izy io
Nofonosina tsara ny faucet sy ny tahony mba hisorohana ny vay. Ny faucet sy ny tahony dia vita amin'ny varahina ho mateza ary metaly ny tsipika. Na izany aza, naveriko ity sety ity noho ny lesoka lehibe iray. Goavana ny tatatra ary lehibe loatra ka tsy misy fantsom-pako mahazatra. Vita plastika maivana ilay fantsakana fa tsy vy.
Rehefa nijery ireo faritra rehetra ireo ny zokiko voalohany dia tezitra izy ary nanozona. Saingy tamin'ny fotoana nahavitany ny faucet dia efa nidera ilay olona namolavola ilay faucet izy ary nanontany ny antony tsy dia tsara loatra ny fitaovana fandroana rehetra. Faly aho fa nifidy ity faucet ity. Ho fanampin'ny fahatsorana dia heveriko fa tsara tarehy. Io ilay fomba notadiaviko.
Izahay dia nividy ity vokatra ity ho solon'ny rafitra faucet taloha, ary ity vokatra ity dia nahatratra ny fanantenana rehetra sy ny sisa! Te hanana zavatra toa kanto izahay, nefa mifanaraka amin'ny haingon-trano / lohahevitra fonenanay. Tsy hoe tsara tarehy fotsiny ity faucet ity, fa malama tsara ary misy fikorianan'ny rano mahavariana. Nametraka an'ity rafitra ity aho tao anatin'ny 20 minitra nefa tsy nisy olon-kafa nanampy. Azoko atao amin'ny olona rehetra eny an-tsena ity vokatra ity mba hampiasa fantsona milentika ankehitriny izay tsy manisy lavaka ao amin'ny poketrany.
nosoloiko faucet mahery vaika (spelling) mahery i Hans miaraka amin'ity singa ity. napetraka ao anatin'ny 15 minitra. malama tsara, hetsika valizy tsara. endrika tsara indrindra hisorohana ny fivezivezena sns amin'ny latabatra granita. sandany lehibe. ny faucet hafa nosoloiko dia 5x ny vidin'ity iray ity. mpanamboatra trano aho, ary nametraka faucet 100. mahafaly!
Milentika amin'ny trano fandroana. Ny lokony sy ny endriny dia toa tsara fa ny faucet rano mafana dia tery loatra ka tsy afaka mivily mora foana ary mitabataba. Miasa tsara ny faucet rano mafana. Ny ampahany rehetra dia tao anaty boaty, ary samy nanana ny mpanasa lamba sahaza azy ireo ary napetraka tsara. Nasiana tombo-kase ny tariby isaky ny tahony rano mafana sy mangatsiaka ka tsy azo ahitsy. Kilema fanaovana azy io. Raha tsy izany dia mandeha tsara ny rano mangatsiaka, fa rehefa ahodina ny tahon'ny rano mafana dia tery sy mikitroka ary avy eo mamela ny rano mafana hivoaka amin'ny faucet.
Hafa tokoa ny fahasamihafana nasehon'ity faucet ity tamin'ny zava-poana! Fonosina tsara, tsara raha ampidirina ao ny fivoriambe feno, nahazo dispenser sy savony mifanentana koa. Misy fitaovana omena hametrahana ny fonony ho an'ny tahony, tsara ihany koa ny manainga ny fonony rehefa manadio tanteraka ny volon'akitra voangona (tsy misy borosy nify). Vidiny lafo koa! Vita tsara! Tena hiverina aho hividy amin'ny ho avy!
tena tsara ilay entana. ny olana fotsiny dia ny iray amin'ireo faucet dia tsy namboarina ary nitoto izy isaky ny namono na namono azy ianao. Tsy maintsy nanao fanovana vitsivitsy aho mba hamahana ilay olana. koa ny fivoahan'ny pop up dia tsy mipoitra ampy ahafahan'ny rano mandeha haingana haingana.
Faucet tena tsara tarehy toa tsara kalitao. Tianay be ilay izy ka nanafatra 2 hafa izahay ho an'ny trano fidiovanay.
Faly izahay amin'ny fijery sy ny hafainganana nandraisanay izany. Somary sarotra ny fametrahana azy fa amin'ny ankapobeny dia vahaolana mora vidy sy tsara ho an'ny fanavaozana ny fandroana anay.
Vokatra tsara! Mora ny mametraka azy ary ny fomba mandeha miaraka amin'ny fandroana vahiny. Mahafinaritra kokoa noho ny zavatra hitantsika tao amin'ny fivarotana fitaovana eto an-toerana izany ary mampatahotra ny vidiny!